Ny fampiharana 10 tsara indrindra ho an'ny iPad | Applelised | Avy amin'ny mac aho
Safidio ny Fampiharana iPad 10 tsara indrindra Asa sarotra tokoa izany satria ny mpampiasa tsirairay dia mila filàna manokana, na izany aza dia hampiharihary ireo rindranasa mamela ireo mpampiasa antonony hahatratra ny tanjon'izy ireo amin'ny fomba mandaitra ary, araka izay azo atao, maimaimpoana, amin'ny fomba tokony tsy very amin'ny tsia iPad.
1 Ny fampiharana 10 tsara indrindra ho an'ny iPad.
1.2 2. Evernote.
1.3 3. Farany.
1.5 5. Google Drive.
1.6 6. GoodReader 4.
1.8 8. SkyPlayer.
1.10 10. Skype.
Ny fampiharana 10 tsara indrindra ho an'ny iPad.
Mandingana ireo rindranasa zanatany "vita amin'ny" Apple como el Pejy, Isa, Keynote, Mozika, iBooks, sns. noho ny antony mazava toa ny fotoanany tonga lafatra hatramin'ny iCloud miaraka amin'ireo sisa tavela amin'ny paoma fanaontsika, ireo dia fampiharana 10 iPad ambony:
Flipboard no mpanangona vaovao / votoaty tonga lafatra izay, miaraka amina interface toa ny magazine, mitandrina tsara, tsotra ary manam-pahaizana, hamela anao hanaraka ny daty amin'izay rehetra mahaliana anao. Azonao atao ny mamorona magazine anao, izay azonao zaraina ary manasa ny namana hiara-miasa aminy mihitsy aza. Azonao atao ny manampy bilaogy, tranokala, RSS feeds ... ary koa ny kaontinao Twitter, Facebook, Google +. Raha fintinina, miaraka amin'ny Flipboard ho eo am-piandohana miaraka amin'ny zava-drehetra tianao ianao ary avy amin'ny toerana iray, tsy mila fampiharana hafa. Raha tsy mino ahy ianao dia ampidino ary andramo araho ny magazine Applelized amin'ny Flipboard.
Inona no holazaina momba Evernote? Satria misy izy io ary ny ankamaroan'ny mpampiasa dia ampy amin'ny kinova maimaim-poana, dia efa mendrika ny ho ao fampiharana 10 iPad ambony. Miaraka amin'ny rafitry ny kahie, ny toetrany multiplatform, ny motera fikarohana mahery azy na ireo karazana rakitra marobe izay anohanany azy, afaka mitahiry, mandahatra, manasokajy, mizara ... pejin-tranonkala izahay, sary, pikantsary, naoty audio, pdf sy snsetera lava. Izy io aza dia mitady amin'ny alàlan'ny naoty nosoratan'ny tanana (tena ilaina amin'ny fampiharana manaraka ho hitantsika). Ho fanampin'izay, afaka mizara kahie amin'ny mpampiasa rehetra izahay ka mety amin'ny fiaraha-miasa ary indrindra, ho an'ny sehatry ny fanabeazana sahala amin'ny traikefa efa niseho.
Betsaka ny rindranasa ao amin'ny App Store mandray an-tànana naoty nefa tsy isalasalana fa ny tsara indrindra dia ny farany farany. Ny fahaizany mamorona kahie, ny fampifangaroana lehibe miaraka aminy Evernote na ireo safidy fanoratana isan-karazany asehony dia mahatonga azy io mendrika ny hanana toerana eo aminy fampiharana 10 iPad ambony.
Maimaimpoana sy maro karazana koa, Dropbox mamela antsika hanana ny antotan-taratasinay rehetra na aiza na aiza ary amin'ny fotoana rehetra, ary koa mizara rakitra sy lahatahiry amin'ireo mpampifandray anay. Ho fanampin'izay, ny antontan-taratasy rehetra izay marihinay fa ankafizinay dia ho hita fa tsy mila fifandraisana Internet. Ny hany drawback dia mety ho ny fihenan'ny fahafaha-mitahiry ny tahiry voalohany ao amin'ny kinova maimaim-poana, 2 GB, izay azontsika atao kosa ny manitatra tsikelikely amin'ny alàlan'ny fanasana ireo fifandraisana, famenoana fanontaniana iray, sns.
Dropbox: Cloud sy Storagemaimaim-poana
Miaraka amin'ilay navotsotra vao tsy ela akory izay antontan-taratasy y Spreadsheets, Drive Io no vahaolana tsara indrindra amin'ny fahasahian'i Microsoft handoa € 69 isan-taona ho an'ny Office for iPad. amin'ny Drive Azonao atao ny mitahiry ny rahona antontan-taratasy rehetra ao anaty rahona, asio hita amin'ny fitaovanao rehetra, vakio, foronina ary amboary ny antontan-taratasy ary, ny tsara indrindra dia zarao amin'izay rehetra tianao ary amboary ho ekipa amin'ny fotoana tena izy.
6. GoodReader 4.
Ity no fampiharana misy karama tokana izay miditra anelanelana fampiharana 10 iPad ambony Ary io dia, ny fotoana kely nampiasako azy, mahatonga azy io ho mendrika. amin'ny tsara mpamaky afaka mamaky sy manitsy ny karazan-drakitra rehetra ianao, manisy tsipika, manisy marika, mampiditra naoty, manoratra amin'ny tanana, sns. Azonao atao koa ny mampifandray azy amin'ny Dropbox na Drive ankoatry ny hafa mba hanananao izay ilainao eo am-pelatanana. Ny fahaizany manova rakitra, ao anatin'izany ny PDF, dia goavana. Andramo izao fa efa ao App Store miaraka amin'ny fihenam-bidy 60%.
GoodReader PDF Editor & Viewer€ 5,99
Andao hijanona tsy hiasa ary hanomboka fialam-boly. VLC, ny mpilalao amin'ny faritra rehetra iPad, iPhone sy Mac. Araka ny nolazain'ilay zazavavy tao amin'ny doka, VLC mivaky hoe "ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra ary ny zavatra rehetra." Tsy hitsahatra hijerena horonantsary mihitsy ianao satria tsy mifanaraka amin'izany ny endriny VLC Hita eo anelanelan'ny fampiharana 10 iPad ambony.
Mpilalao media VLCmaimaim-poana
Angamba tsy dia fantatra loatra ity fampiharana ity na izany aza SkyPlayer azonao atao ny mandefa horonantsary sy andian-dahatsary tsy misintona azy ireo ary tsy mila dokam-barotra avy pejy sarimihetsika maimaim-poana toy ny seriespepito, peliculaspepito ary ny hafa mitovy aminy. Ao amin'ny Ity lahatsoratra ity lazainay aminao ny fomba.
Tsy ampy ny teny satria fantatry ny rehetra ary ankehitriny, miaraka amin'ny maody maimbo maimaimpoana, Spotify lasa ilaina amin'ny mpitia mozika, farafaharatsiny mandra-pahatongan'ny iTunesRadio lazao ny mifanohitra amin'izay.
Ny hany rindrambaiko Microsoft mitsivalana eo anelanelany fampiharana 10 iPad ambony es Skype. Fantatry ny mpamaky rehetra, miaraka amin'ny Skype afaka mifandray amin'ny fifandraisana rehetra isika, mendrika ny fihenam-bidy, amin'ny alàlan'ny fandefasan-kafatra na antso an-tsary eo noho eo. Izy io koa dia multiplatform ka hiara-hampifanaraka azy hatrany amin'ireo fitaovantsika rehetra.
Skype ho an'ny iPadmaimaim-poana
En App Store misy an'arivony sy an'arivony ara-bakiteny fampiharana. Angamba fantatrao ny iray tsara kokoa izay afaka manolo amin'ny fomba mahomby kokoa ny iray amin'ireto, azonao atao ve ny milaza aminay?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Fampiharana iPad 10 ambony indrindra
Na dia mampahazo aina aza ny fampidirana an'i Evernote, Penultimate dia iray amin'ireo rindrambaiko fanoratana izay nanandramako iray amin'ireo malemy indrindra satria tsy manana ny safidy "proximity view". Manoro hevitra ny Upad na Notes Plus aho.
Tantano amin'ny fomba mahomby kokoa ny tamba-jotra Wi-Fi anao amin'ny AirRadar